11/01/2011 - 12/01/2011 - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မြန်မာစီး​ ပွား​ရေး​ လုပ်ငန်း​ရှင်​တွေထဲမှာ စစ်အဏာရှင်​ဟောင်း​ ဦး​သန်း​ရွှေရဲ့​ မိသား​စုနဲ့​ ရင်နှီး​ကျွမ်း​ဝင်သူလို့​ လူသိများ​တဲ့​ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​ရှင် ဦး​တေဇဟာ ဒီက​နေ့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း​ ​နေအိမ်မှာ ​တွေ့​ဆုံခဲ့​တယ်လို့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်​နေအိမ်နဲ့​ နီး​စပ်သူ​တွေဆီက သိရပါတယ်။
ဒီ​တွေ့​ ဆုံမှုနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​တော့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်အ​နေနဲ့​ တရား​ဝင် အတည်ပြုချက်မ​ပေး​ပါဘူး​။ အ​မေရိကန်နဲ့​ ဥ​ရောပ နိုင်ငံ​တွေက ဦး​တေဇနဲ့​ သူရဲ့​ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့​ ထူး​ထ​ရေး​ဒင်း​နဲ့​ ဆက်စပ် ကုမ္ပဏီ​တွေကို စီး​ပွား​ပိတ်ဆို့​ ဒဏ်ခတ်ထား​ပါတယ်။
အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းများကြောင့် တောင်သာ၌ ထန်းပင်များ ရှားပါးလာ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်သာမြို့နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများတွင် သစ်တောများ ပြုန်းတီးသွားပြီးနောက်ပိုင်း အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းများ၌ ထန်းပင်များကို အသုံးပြုလာရသောကြောင့် ထန်းပင်များရှားပါးလာပြီဟု ဒေသခံအချို့ကပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်သာ၊ မလှိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများတွင် ယခင်က ကန္တာရတောများ၊ ရှားစောင်းတောများနှင့် ဘောစကိုင်းပင်များ ပေါများစွာပေါက်ရောက်သော်လည်း ထင်း၊ မီးသွေး၊ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ထန်းလျက်ချက်လုပ်ငန်းများကြောင့် ပြုန်းတီးသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဒေသများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးကပြောသည်။
"၁၉၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကာလတွေတုန်းကဆိုရင် တောင်သာနဲ့ မြင်းခြံကြား၊ ညောင်ဦးနဲ့ မြင်းခြံကြားတစ်လျှောက်မှာ ရှားတောတွေ အများကြီးရှိခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်းအုတ်ဖုတ်လ်ုငန်းတွေက တောလိုက်ဝယ်ပြီး သုံးလာကြတယ်။ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းမှာ အုတ်ငါးထောင်၊ တစ်သောင်းဖုတ်တော့မယ်ဆိုရင် ထင်းက ၅ တန်ကနေ ၁၀ တန်အထိ ကုန်တာ။ ဒါကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု အဆိုးဆုံးဖြစ်တာ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်ပဲ" ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ထို့ပြင် မီးသွေးဖုတ်လုပ်ငန်းများကြောင့်လည်း သစ်တောများပြုန်းတီးမှုများခဲ့ပြီး တောင်သာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်မှ တစ်ရက်လျှင် မီးသွေးများကို ၁၀ ဘီးကားဖြင့် ၃ စီးမှ ၅ စီးအထိထွက်နေကြောင်း၊ မြင်းခြံမြို့အနေဖြင့်ပင် တစ်နေ့လျှင် ၆ ဘီးကားဖြင့် မီးသွေးအနည်းဆုံး ၅ စီး စာခန့်လိုအပ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ဝင်သည့် မီးသွေးအများစုတွင် မြင်းခြံ၊ တောင်သာနယ် မီးသွေးများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
"အရင်တုန်းက ထန်းလျက်ချက်လုပ်ငန်းရှိတယ်။ ထန်းတက်တဲ့ လူရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်း မလေးရှားဘက်အလုပ်သွာလုပ်ကြတော့ ထန်းတက်တဲ့လူတန်းစားလည်း မရှိတော့ဘူး။ ထန်းတောပိုင်ရှင်တွေကလည်း သူတို့တောတွေ ဒီအတိုင်းထားမယ့်အစား အုတ်ဖုတ်သမားတွေဆီကို တစ်ပင်ကို ၅၀၀၀၊ ၆၀၀၀၊ ၇၀၀၀ နဲ့ အမျိုးမျိုးရောင်းလာကြတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အိမ်ဆောက်ဖို့ သစ်တွေဈေးကြီးလာတဲ့ အတွက် ထန်းပင်ကို အသုံးပြုလာကြတွေလည်း ရှိတယ်" ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
ထန်းပင်များကို အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်မှာ ၅ နှစ်ခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် ယခုအခါ ထန်းပင်များရှားပါးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ထန်းပင်တစ်ပင်သည် ထန်းရည်ထုတ်နိုင်ရန် အတွက် အနည်းအနှစ် ၃၀ အထိ စောင့်ရကြောင်း သိရသည်။
ပေါ်ပြုလာ - No 47, Vol 3
NLD ကြားဖြတ်ဝင်မည်ဆိုခြင်းကြောင့် ၁ဝ ပါတီ၏အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်းခဲ့ဟု ဆို
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေ
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLDသည် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ကာ ကြားဖြတ်ရွေးေ ကာက်ပွဲအားနေရာ လပ်မရှိ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဆိုခြင်းကြောင့် ၁ဝ ပါတီ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် မူလကချမှတ်ထားသောအစီ အစဉ်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ရသည်ဟု ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက ပြောသည်။ ”ကျွန်တော်တို့က ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကျွန် တော်တို့ မဟာမိတ်ပါတီ ၁ဝ ပါတီ စုပေါင်းထားတဲ့ ၁ဝ ပါတီ က ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်။ ၁ဝ ပါတီက မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုမှာ တစ်ယောက်ပဲပြိုင်၊ ကျန်တဲ့သူက ဝင်ကူဆိုပြီးလုပ်ထား တာ။ အဲဒါက လည်း ပြီးခဲ့တဲ့သုံးလလောက်ကတည်းက စီစဉ်ထား တာ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ဖို့ စာရင်း ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုကျတော့NLDကပါ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေက ပျက် သွားပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မပြောတတ်သေးဘူး။ ပြန်တိုင်ပင်ရဦး မယ်။NLD ကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်လာခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော် တို့အတွက်က အခက်အခဲ မရှိပါဘူး”ဟု ဦးသုဝေက ဆိုသည်။ဆက်လက်၍ ၄င်းက NLD ပါတီအနေဖြင့် တရားဝင်ပါတီ အဖြစ် ရပ်တည်ကာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်၍ လူထုအဆုံး အဖြတ်ခံယူခြင်းအား ကြိုဆိုကြောင်း NLDပါတီတွင် လုပ်နိုင်ကိုင် နိုင်သူများရှိသည့်အပြင် ထိုလူများမှာ လူထုကိုယ်စားလွှတ်တော် ထဲတွင် ပြောနိုင်ဆိုနိုင်မည်ဟု ယူဆကြောင်း၊ အကယ်၍ လူထု ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီအနိုင်ရခဲ့ ပါကလည်း လူထုဆန္ဒဖြစ်သည့်အတွက် လက်ခံပါကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်းပြောသည်။
နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ဟီလာရီကလင်တန်ကို တွေ့ရစဉ်
နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်ကို တွေ့ရစဉ်
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ ယနေ့ ညနေ ၄နာရီခွဲခန့်တွင် ရောက်ရှိ
နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ ယနေ့ညနေ ၄နာရီခွဲခန့်တွင် ရောက်ရှိလာသော အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့် လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းထောက် ၁၅၀ ၀န်းကျင်ခန့်လာရောက် သတင်းရယူနေကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်သည် မနက်ဖြန် ဒီဇင်ဘာ (၁) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဟု သိရှိရသော်လည်း သီးခြားအတည်ပြုချက် မရရှိသေးပါ။ ဟီလာရီကလင်တန်သည် နေပြည်တော်ရှိ သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် တည်းခိုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Clinton Arrives In Myanmar On Landmark Visit
U.S. Secretary of State Hillary Clinton has arrived in Myanmar at the start ofalandmark three-day visit.
Clinton is the first U.S. secretary of state to visit the Southeast Asian country in more than 50 years.
Clinton arrived on November 30 in the remote new capital of Naypyitaw, where she is to hold talks with the new military-backed civilian leadership.
U.S. officials said Clinton will press Myanmar's leaders on their readiness to open up after decades of international isolation.
She will also travel to the commercial capital Yangon where she is to hold discussions on December 1 with pro-democracy leader and Nobel Peace Prize laureate Aung Sun Suu Kyi.
Myanmar has just begun to emerge from halfacentury of isolation after the military seized power inacoup in 1962, starting decades of brutal authoritarian rule.
ကလင်တန် ဗိုလ်ချုပ်လူထွက်အုပ်စု နဲ့ မာမီများ
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ကို ကြိုဆိုရန်
ဟီလာရီကလင်တန် သွားရောက်မည့် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ တနေ့၆ ကြိမ် ဗုံးရှာ
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း သွားရောက်မည့် နေရာတခုဖြစ်သော ရွှေတိဂုံ စေတီတော်တွင် လုံခြုံရေး အစီအစဉ်များ အထူးတိုးမြှင့်ထားပြီး ဗုံးရှာဖွေမှု တရက် ခြောက်ကြိမ်ခန့်အထိ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဂေါပက အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
တောင်းခံထားပြီး ယင်းတို့အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် ညနေ ၃ နာရီထက် နောက်မကျစေဘဲ နေပြည်တော်
နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်
- ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိမည်
ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်
- မနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးရုံးတွင် ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နှင့် တွေ့ဆုံမည်။
- မနက် ၁၀ နာရီတွင် သမ္မတရုံးတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်သည်။
- ယင်းနောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က နေ့လည်စာဖြင့် ဧည့်ခံမည် ဖြစ်သည်။
- ယင်းနောက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းတို့နှင့် သီးခြားစီ တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်သည်။
- ထို့နောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာမည် ဖြစ်သည်။
- ညနေ ၄ နာရီတွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး တဆက်တည်း ရွှေတိဂုံစေတီတော် သို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
- ချတ်ထရီယံ ဟိုတယ်တွင် ညအိပ် တည်းခိုမည် ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်
- နံနက် ၉ နာရီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမည်။
- ယင်းနောက် ကိုးမိုင်ရှိ ရှမ်းစာကြည့်တိုက်၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဌာနသို့ သွားရောက်ပြီး ရှမ်းအမျိုးသားများနှင့် တွေ့ဆုံမည်။
- မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံးတွင် နိုင်ငံရေးသမားအချို့နှင့် တွေ့ဆုံမည်။
- ညနေ ၄ နာရီမှ ၅ နာရီအကြား ရန်ကုန်မြို့မှ လေကြောင်းဖြင့် ပြန်လည် ထွက်ခွာမည်။
မျိုးသိဏ်း ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)
NLD ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုပြင်းထန်နိုင်ကြောင်း ဦးအောင်သိန်းလင်းက ပြောကြား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုပြင်းထန်နိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုပြီးပြင်းထန်လာမည်ဟု ထင်ပါသလားဟူသော မေးခွန်းကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ''အဲဒါတော့ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ပြိုင်ဘက်တွေ ပိုပြီးများလာတယ်ဆိုရင် ပိုမြိုင်မှာပေါ့။ ပြိုင်တဲ့သူတွေများတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှု များမှာပေါ့''ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကျင်းပမည့် လစ်လပ်မဲ ဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရှိသလို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှလည်း လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
''လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးပြိုင်မှာပါပဲ။ လူကတော့ လျာထားပြီးတော့မှ ဗဟိုဌာနချုပ်ကို တင်ထားတယ်။ ဗဟိုဌာနချုပ်က အတည်ပြုမှာပေါ့''ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြား ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ''အရေးကြီးတာကတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ သူတစ်ပါး သြဇာခံရတဲ့နိုင်ငံ မဖြစ်ဖို့။ အဲဒီနိုင်ငံဘ၀ကို မရောက်ဖို့ ဒါပဲအရေးကြီးတယ်။ ဘယ်သူတွေပြိုင်တာ၊ မပြိုင်တာထက်ကို အရေးကြီးတာက တို့တိုင်းပြည် တို့လူမျိုးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ တို့တွေ သားစဉ်မြေးဆက် ဘယ်တော့မှ သူများသြဇာခံရတဲ့ဘ၀ကို မရောက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်'' ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၄၈ ခု အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားရှိရေး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများသို့ နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယပတ်က အကြောင်းကြားထားပြီး၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် နေရာ ၄၀၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ခြောက်နေရာ၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် နှစ်နေရာ စုစုပေါင်း ၄၈ နေရာတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ လစ်လပ်လျှက်ရှိသည်။
KIA နှင့် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် တိုက်ပွဲ (ရုပ်/သံ)
အယ်ဂျာဇီးယာ မှ KIA နဲ့မြန်မာအစိုးရတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ တောတွေတောင်တွေထဲမှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးတင်ပြထား တဲ့ ရုပ်/သံ ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအရေး အိုဘားမားနှင့် ကလင်တန်တို့ လောင်းကြေးထပ်
(Associated Press မှ 28 Nov 2011 ရက်စွဲပါ “Obama, Clinton gamble on Myanmar” သတင်း ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပီာလာရီကလင်တန်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခု သီတင်းပတ်တွင် စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ လောင်းကြေးထပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံး သွားရောက်မည့်ခရီးစဉ်သည် အမေရိကန်နှင့် မပာာမိတ်များက တရုတ်နိုင်ငံကြီးထွားမှုကို စိုးရိမ်နေသော ဒေသတွင် တရုတ်သြဇာ လျော့သွားခြင်း အပါအဝင် ရလာဒ်ကောင်းများ ထွက်ပေါ်လာမည်ပာု ဝါရှင်တန်က တွက်ချက်မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။ ထိုမျှသာမကပဲ ဒီမိုကရေစီလိုလားလှုပ်ရှားသူများကို ရက်စက်စွာနှိမ်နင်း၍ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအလွန် မြန်မာအစိုးရသစ်၏ လမ်းလျှောက်သင်စ ဒီမိုကရေစီခြေလှမ်းငယ်များ ကိုလည်း အကဲခတ်ဦးမည်ဖြစ်သည်။
တနလာင်္နေ့တွင် ဝါရှင်တန်မှ ထွက်ခွာသွားသည့် ကလင်တန်သည် ကိုရီးယားတွင် တစ်ထောက်နားပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂ ရက်တာ လည်ပတ် မည်ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးနေ့တွင် နေပြည်တော်၌ မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီးလျှင် ယခုခရီးစဉ်၏ ဦးစားပေးကိစ္စ ဖြစ်လာမည့် သောကြာ နေ့ အစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။
လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စီစဉ်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခုလ အစောပိုင်းတွင် သမ္မတအိုဘားမား နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် ဝါရှင်တန်က နေပြည်တော်ကို ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း သည် အပြုသဘောဆောင်သော ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားကာ ကလင်တန်၏ ခရီးစဉ်ကို ကြိုဆိုခဲ့သည်။ ကလင်တန်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလေးစားကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အိုဘားမား အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် မုန်လာဥတစ်လှည့်၊ တုတ်တစ်လှည့် ဆုပေးဒဏ် ပေးနည်းလမ်း ကျင့်သုံးရန် မူဝါဒ ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုနောက်ဆုံးပေါ်ထွက်လာသော ကလင်တန်၏ ခရီးစဉ်သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပထမဆုံး အမေရိကန်- မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအဓိက တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှု တစ်ခုဖြစ်ပေ သည်။ မနှစ်က ရွေးကောက်ပွဲများအပြီး အစိုးရသစ်အာဏာရလာကာ ကြီးကြီးမားမား တံခါးဖွင့်လာ ချိန်တွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး အရှိန်ရလာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော ၃ လခန့်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမေရိကန်အစိုးရ၏ အထူးသံတမန်က ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် လာရောက်ခဲ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်က ၁ ကြိမ်လာရောက်ခဲ့သည်။
နောက်ပြန်လျှောနိုင်သည့်အန္တရာယ် ရှိနေသော်လည်း လတ်တလော ကြိုဆိုထိုက်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အကဲခတ်သုံးသပ်မည့် ခရီးစဉ်ကို စီစဉ် ပြုလုပ်ရန် ပီာလာရီကလင်တန်ကို အထက်ပါ အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက တွန်းအားပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီအနိုင်ရခဲ့သော ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် တပ်မတော်အစိုးရ၏ လက်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် လက်ရှိအာဏာရ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပောာင်း) သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက်တွင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို တွန်းအားပေးလာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော သီတင်းပတ်က လွှတ်တော်တွင် ယခင်ကမရှိခဲ့ဘူးသော ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ခြင်းကို ခွင့်ပြုမည့် ဥပဒေ ကြမ်းကို အတည်ပြုခဲ့ သည်။ ထို့အပြင် သတင်းမီဒီယာ၊ အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားခွင့် စသော ကဏ္ဍများတွင်လည်း ချုပ်ချယ်မှုအချို့ ရုတ်သိမ်း ပေးခြင်းကြောင့် တိုးတက်မှုများ ရှိလာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲအတုများကို သပိတ်မှောက်ခဲ့သည့် NLD ပါတီသည်ပင် နောင်ကာလ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရန် ပါတီကို မှတ်ပုံတင်နေပြီဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း မတ်လက အာဏာရလာသော အစိုးရကို တပ်မတော်ကိုယ်စားပြုနေသူများက လွှမ်းမိုးထားကြဆဲ ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး အာမခံမှု၊ တရုတ်နှင့် အပူးလွန်ခြင်းကို လျှော့ချလိုမှုတို့မှာ သေချာရေရာခြင်း မရှိသေးပေ။
ထို့အပြင် အဂတိလိုက်စားမှုများ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ပြန့်ပွားနေခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစွာကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားခြင်း၊ နိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်နေခြင်း စသော ပြဿနာများလည်း ကျန်ရှိနေသည်။ မကြာသေးမီလပိုင်း အတွင်း က ပြည်သူတို့ကန့်ကွက်သော “တရုတ်အမြတ်ထွက် ရေလှောင်တမံစီမံကိန်း” ကို မြန်မာအစိုးရက ရပ်ဆိုင်းပစ်ခဲ့သောကြောင့် တင်းမာမှုအချို့ရှိခဲ့သော်လည်း အလွန်လက်မြန်၍ ခြေသွက်သော ဘေဂျင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်၏ ခရီးစဉ်မတိုင်မီ ၎င်း၏ ဒုတိယသမ္မတကို မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံစေကာ လက်ဦးမှုရယူရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် “ဒုတိယသမ္မတ ဇီဂျင်ပင်းက မြန်မာနှင့် ခိုင်မာနေ သော ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်း ရန် ကတိပေးခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စများမှ မည်သည့်စိန်ခေါ်မှုများကိုမဆို ပြေလည်အောင် အဖြေရှာရေး တွန်းအားပေးရန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သည်” ပာု ဖော်ပြ ထား သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးမလုပ်ရန် တားမြစ်ထားသော တင်းကြပ်သည့် အရေးယူ ဒဏ်ခတ် မှု Sanctions များမှာ ဆက်လက်ချမှတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီး ယင်း Sanctions များ ရုတ်သိမ်း ပေးရန် မြန်မာအစိုးရက တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်။
ယခု ကလင်တန်၏ ခရီးစဉ်သည် Sanctions များရုတ်သိမ်းပေးရန် မပာုတ်ဘဲ အချက်အလက်ရှာဖွေလေ့လာမည့် ခရီးစဉ်သာ ဖြစ်ကြောင်း သို့သော်လည်း မြန်မာအစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကို စိတ်ပါလက်ပါ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြသနိုင်ပါက Sanctions များ ရုတ်သိမ်း မည့်ကိစ္စ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူ များက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။
yangonchronicle မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
မြန်မာနှင့် တရုတ် အဓိဋ္ဌာန်ပြု
(Channel News Asia မှ 28 Nov 2011 ရက်စွဲပါ China, Myanmar vow deeper ties ကို ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်)
အနာဂတ်တရုတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမည်ဟု သတ်မှတ်ပြောဆိုခံထားရသော ထိပ်တန်းအရာရှိကြီး Xi Jinping သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံခိုင်မာသော ချစ်ကြည်ရေး ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ကတိကဝတ်များပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနရေးသားချက်အရ သိရသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သမိုင်းဝင်ခရီးစဉ် မသွားရောက်မီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင် ယင်းသို့ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့်ခရီးစဉ်ကြောင့် ဟီလာရီကလင်တန်သည် ရာစုနှစ်ဝက်ကျော် ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်သည့် ပထမဆုံးအမေရိကန် ထိပ်တန်း အရာရှိတစ်ဦး ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုတာကာလမျှ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် သံတမန်ရေးနှင့် စီးပွားရေးအရ များစွာမှီခိုခဲ့ရပြီး လွန်စွာရင်းနှီးသော ချစ်ကြည်ရေးထူထောင်ထားခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့်ခရီးစဉ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အကျိုးစီးပွားအတွက် အခွင့်အလမ်းများရရှိအောင် ကြိုးပမ်းမည့် ခရီးစဉ်အဖြစ် လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူများက ရှုမြင်ကြသည်။
မစ္စတာ Xi Jinping က မြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်များအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန် အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ဆင်ဟွာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြသည်။
"ယခင်မျိုးဆက်ဟောင်း နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများ ထူထောင်ခဲ့သော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသည် စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်မှုများ များပြားလှသည့် နိုင်ငံ တကာ ကွင်းပြင်မှ အပြောင်းအလဲများကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်" ဟု တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ မစ္စတာ Xi Jinping ၏ပြောကြားချက် ကို ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ကိုးကား ရေးသားသည်။
"တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်စုံကျယ်ပြန့်သော နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ မိတ်ဖွဲ့မှုတစ်ရပ် ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာစေနိုင်ဖို့ မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်သွားမှာပါ" ဟု Xi Jinping ကပြောကြားသည်။ ၎င်းသည် လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရာထူးရယူလိမ့်မည်ဟု လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူ အများစုက မျှော်လင့်ထားကြသည်။
မြန်မာနှင့် တရုတ်နှစ်နိုင်ငံသည် ကာလကြာရှည်စွာ ရင်းနှီးချစ်ကြည်သော မဟာမိတ်နိုင်ငံများဖြစ်ခဲ့ကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တရုတ်ပြည်က စီးပွားရေးအရလွှမ်းမိုးမှုများ၊ သမိုင်းဝင်သည့် နယ်စပ်ပဋိပက္ခများအပေါ် မကျေမချမ်း ဖြစ်သူ အချို့နှင့်အတူ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာ ရှုပ်ထွေးနက်နဲလှသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးခြင်း၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ လုပ်ဆောင်လာသော မြန်မာအစိုးရက မကြာသေးခင် ကာလအတွင်း တရုတ် ကျောထောက်နောက်ခံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုကို ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်သည်။
ယင်းစီမံကိန်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ဒေါ်လာ ၃ ဒဿမ ၆ ဘီလီယံအကုန်အကျခံကာ တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းပြီးဆုံးပါက နယ်စပ်ဒေသမှ ဖြတ်ကျော်ကာ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွယ်တန်းရန် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
လေ့လာအကဲခတ်သူများက ဟီလာရီကလင်တန်၏ ခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ထင်ရှားထူးခြားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးရန် ရည်ရွယ်ထားရုံသာမက တရုတ်ပြည်၏ အိမ်နီးချင်းတံခါးဝသို့ တက်ရောက်ကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သြဇာ လွှမ်းမိုးရေး တိုက်ပွဲကို လှုပ်ခါပစ်ရန်အထိ ရည်မှန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုကြသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကလည်း သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ သြစတြေးလျ၌ အခြေချထားမည့် အစီအစဉ်ကို ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ဘေဂျင်းအစိုးရက 'လုံးလုံးလျားလျား လျော်ကန်သင့်မြတ်မှုမရှိ' ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အမေရိကန်သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုမှာ အကန့်အသတ်နှင့် ရှိနေဖွယ်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဝါရှင်တန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ အားလုံးကို ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားပြီး အဆိုပါ ပိတ်ဆို့မှုများအားလုံး အဆုံးသတ်ရေးမှာ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် မဖြစ်မနေ ရယူရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
KIA တပ်ရင်း ၂၇ အခြေ စိုက်စခန်းအား မြန်မာ အစိုးရတပ်မှ သိမ်းပိုက်
ကချင်ပြည်နယ်အရှေ့တောင်ဘက်ဘလောင် ဒိန်ဆာ (Balawng Dingsa) တွင် အခြေစိုက် ထားသော KIA တပ်ရင်း (၂၇) အား မြန်မာ အစိုးရတပ်မှ နိုဝင်ဘာ၂၈၊ တနင်္လာနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်တွင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
အစိုးရတပ်၏ လက်နက်ကြီးများ အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဗိုလ်မှူး ယော်ထုံ ဦးဆောင်သော ၎င်းတပ်ရင်း အခြေစိုက်စခန်း အား KIA စစ်သားများ ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIA အရာရှိများ အတည်ပြုပါသည်။
ဘလောင်ဒိန်ဆာ တပ်ရင်းဌာနချုပ်သည် ဗန်းမော်ခရိုင် မံဝင်းမြို့၏ အနောက်ဘက် ၅ မိုင်ခန့် အကွာ တွင်ရှိပြီး KIA တပ်မဟာ ၃ အောက်တပ်ရင်းများအနက် ယင်းစခန်းသည် ပထမဆုံးအစိုးရ တပ်လက် အောက်သို့ ကျသွားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းမှ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက မိတ္ထီလာ အခြေစိုက် တပ်မ အမှတ် ၉၉၊ ပဲခူး အခြေစိုက် တပ်မ အမှတ် ၇၇ နှင့် ကျောက်မဲအခြေစိုက် စကခ-၁ အောက် တပ်ရင်းများမှ စစ်အင်အား ရာပေါင်းများစွာကို ကချင်-ရှမ်းနယ်စပ် နမ့်ခမ်းနှင့် မံဝင်းမြို့များသို့ ပို့ထားသည်။
ထို့ကြောင့် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် စစ်ကူရောက်လာ မြန်မာစစ်သားများနှင့် နယ်မြေခံ KIA တပ်ရင်း ၁ နှင့် တပ်ရင်း၂၇ တပ်ဖွဲ့များကြား တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ်ဖြစ်လာသည်။
မြန်မာအစိုးရတပ်က ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ကို အဓိကဆက်သွယ်ပေးသည့် မူဆယ်-နမ့်ခမ်း-ဗန်းမော် လမ်းကြောင်းမှ KIA တပ်များကို ရှင်းရန်အတွက် ယခုလို အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် စစ်ဆင် နေခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရလုံခြုံသမားများကို ကလင်တန်လုံခြုံရေးအဖွဲ့က မှန်ပြောင်းရှည်သုံးခွင့် မပြု
ကလင်တန်ခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရလုံခြုံသမားများကို ကလင်တန်လုံခြုံရေးအဖွဲ့က မှန်ပြောင်းရှည်သုံးခွင့် မပြု
ဟီလာရီကလင်တန် (Hilary Clinton) ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း လုံခြုံရေးအရ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို မြန်မာအစိုးရ လုံခြုံရေးများ အသုံးမပြုရန် တားမြစ်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသည့် ဟီလာရီ ကလင်တန်၏ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“အဓိကတော့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းရှည်တွေနဲ့ မကြည့်ဖို့ ညှိထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလည်း ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေတော့ အသုံးပြုခွင့် ပြုတယ်ဆိုပြီး အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းထားကြတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ် ၅၀ အတွင်း ပထမဦးဆုံးလာရောက်မည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံး အစိုးရအရာရှိဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်သည် နိုဝင်ဘာ ၃၀ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းတွင် အရှေ့အာရှထိပ်သီးညီလာခံသို့ တက်ရောက်နေစဉ် အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား(Barack Obama) က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်မည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်။
ရန်ကုန်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့လည်း ကလင်တန်၏ လုံခြုံရေးသမား ၄ယောက် ရောက်ရှိနေပြီး ခြံဝင်းအတွင်းအပြင်ကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးနေကြကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်လုံခြုံရေးတာဝန်ခံ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်သော ကလင်တန်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးစသည့် တိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်ရရှိရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် အချက်အလက်များကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် စူးစမ်းရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမတ်တချို့ ကလင်တန်ခရီးစဉ်အပေါ် သတိပေး
သာကေတမြို့နယ် ၁၃ ရပ်ကွက် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
သာကေတမြို့နယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ဇေယျဝတီ (၂ )လမ်းရှိ လောင်စာဆီ သိုလှောင်ထားသောအ်ိမ်တွင် ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်က မီးစတင်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကာ အိမ်ခြေ (၈)လုံး မီးလောင်ကျွမ်း ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး အိမ်(၅)လုံးခန့်အား မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းခြင်း မရှိစေရန် ဖြိုချခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါ မီးလောင်မှုကို သွားရောက်သတင်းရယူခဲ့သည့် The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။ အချိန် ၁ နာရီအကြာလောင်ကျွမ်းခဲ့သော အဆိုပါမီးကြောင့် အမျိုးသမီး (၃) ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး မီးဘေးသင့်ပြည်သူများကို အဆိုပါ ရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မာရုံတွင် ယာယီနေရာချပေးထားကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
မြို့မရဲ့တယောဆရာကြီး ဦးတင်ဝင်း ကွယ်လွန်
မန္တလေး မြို့မအပျော်တမ်းတူရိယာအသင်းကြီးရဲ့ တယောဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမြို့သစ် ဆ-၇/၁၁ နေ တယောဆရာကြီး ဦးတင်ဝင်း (အသက် ၆၅နှစ်)သည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၁ အင်္ဂါနေ့ ညနေ ၅:၂၀အချိန်တွင် ၉၆ပါးသောရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်ရှိသွားပါတယ် ။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးသည် ဒေါ်လယ် နဲ့ သား၂ယောက် သမီး၁ယောက် ကျန်ရစ်ပါတယ် ။ မနက်ဖြန် နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီအချိန် တောင်မြင့်သုဿာန်သို့ ပို့ဆောင်သင်္ဂြိုလ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြို့မတူရိယာအသင်းကြီးမှ သူ့မိသားစုများနဲ့ထပ်တူထပ်မျှ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမိပါကြောင်း ။ ဆရာဦးတင်ဝင်း ကောင်းရာသုဂတိသို့ လားပါစေ လို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သကြပါကြောင်း ။
by Thant Zaw (Myoma) , Mandalay.
မြန်မာအစိုးရနဲ့ KIO ဆွေးနွေး
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့၊ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်။
မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အခု ညနေပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို အခြေခံပြီး ပြေလည်ရေးကို ဆွေးနွေးသွားလိုကြောင်း KIO အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူ KIA ဒု စစ်ဦးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်က အာရ်အက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ် စက်မှုဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်းဦးဆောင်ကာ လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းဇော်နဲ့ မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြီး KIO အဖွဲ့ဘက်က ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇောင်းခရားအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦး တက်ရောက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးရာတာဝန်တစ်ခုကို ရနိုင်ဖွယ်ရှိနေဟု သတင်းထွက်ပေါ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ပါတီကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲဝင်ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော တာဝန်ကြီးတစ်ခုကို ပေးအပ်ခြင်းခံရနိုင်ဖွယ်ရှိနေကြောင်း နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းမှ သုံးသပ်ပြောဆိုသံများကြားရသည်။ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်၊ ပြောဆိုသံများမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော တာဝန်ကြီးတစ်ခုကိုရလာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပြီး သမ္မတကြီး၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲက ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင်က 'ဒေါ်အောင်ဆန်းစုအနေနဲ့ ပါတီပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်၊ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ အရည်အချင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဝင်ဆံ့မှုတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နေရာကို အပေးခံရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုတာဝန်လဲဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။ ဒါကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပဲ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
"ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကျွန်တော်မပြောလိုပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံရေးရာနဲ့ ပတ်သက်တာပဲ တန်တာလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ တန်ဖိုးက ဒါ့ထက်ပိုနေရင်ရော၊ ကျွန်တော်တို့ ပါတီပြန်ဝင်တာက လွှတ်တော်ထဲကို အရောက်သွားဖို့ ဝင်တာဖြစ်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့လည်း အချက်သုံးချက်ကိုပဲ အဓိကထားပြီး လွှတ်တော်ထဲကို ပြန်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးဆိုတာပါပဲ" ဟု NLD ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောကြားသည်။
"ဒေါ်စုက နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝတယ်။ ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်၊ နိုင်ငံတကာကလည်း ထောက်ခံတယ်၊ လေးစားတယ်။ နိုဘယ်လ်ဆုရှင်လည်းဖြစ်တယ်။ တကယ်အသိအမှတ်ပြုပေးရင် ကောင်းတာပေါ့။ ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးအတွက် သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းကို သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်" ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွှန့်က မှတ်ချက်ပြုပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို စင်ကာပူ လိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်း ပုံပြော
ရန်ကုန်မြို့ မှ ရပ်ကွက်တချို့ 
ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကို စင်ကာပူကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ဥက္ကဌ၊ အမှတ် (၁) နှင့် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ဆန္ဒအပေါ် အခြေခံ၍ ပြောကြားသည်။ ၂၈-၁၁-၂၀၁၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ အမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြည်တွင်းမီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ယင်းကပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
"အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို စင်ကာပူးက လာကြည့်ရတာပေါ့။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အခု စင်ကာပူကို ကျွန်တော်တို့က ပြန်ကြည့်တာပေါ့။ ဒါက သမ္မတက ရန်ကုန်ကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒပါ" ဟု ယင်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကို စင်ကာပူနိုင်ငံကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရာတွင် လတ်တလောအနေဖြင့် လမ်းကောင်းမွန်ရန်လိုခြင်း၊ ရေစီး၊ ရေလာ၊ ရေပေးဝေခြင်းစနစ် ကောင်းမွန်ရန်လိုခြင်း၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ အဆင့်အတန်း၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို ဖြေရှင်းရန် ခုံးကျော်တံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ မီးရထားလမ်းကွန်ရက်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
"အခုလမ်းတွေ ပြင်နေတယ်။ ပျက်နေတာတွေ ပြန်ပြင်တဲ့အခါမှာ ညအချိန်မှာလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်။ Taxi Service၊ Bus Service တွေကအစ တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ရမယ်။ စင်ကာပူကို သွားကြည့်မယ်။ သူတို့ဘက်က အကြံပြုမယ်။ ဒါတွေပါတာပေါ့" ဟု ယင်းက ဆိုသည်။
ဟင်္သာတမြို့ နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ မုဒိန်းကျင့် ခံရတဲ့ မိန်းကလေး မှ ရင်ဖွင့် စကား (ရုပ်/သံ)
ဟင်္သာတမြို့ နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ မုဒိန်းကျင့် ခံရတဲ့ မိန်းကလေး မှ ရင်ဖွင့် စကား နဲ့ အတူ သူရဲ့ အကျိူးဆောင်ရှေ့ နေ ပြောပြချက်တွေကို ဗွီဒီယိုဖိုင်မှာ ကြည့်ရှုနားထောင်နိုင်ပါတယ်။
အဓ္ဓမလယ်မြေသိမ်းယူပြီးဖောက်တဲ့ ရထားလမ်း (တိုင်ကြားစာ-ရုပ်/သံ)
မီးရထားဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်မင်းလက်ထက်က မီးရထားကွန်ယက် (မီးရထားကွန်ယက်တဲ့ဗျာ) လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဟသာင်္တ၊ ညောင်တုန်း မီးရထားဖောက်လုပ်ရာမှာ လယ်သမားကြီးတွေရဲ့ လယ်မြေတွေကို အဓမ္မသိမ်းယူပြီး ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်...။ တမိုင်ကို မြန်မာငွေ ၁၃၂သန်း အကုန်အကျခံပြီး ၄၉မိုင်ရှည်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။ (တွက်တာကြည့်ကြပါတော့ အိတ်ထဲရောက်တာ ဘယ်လောက် ရှိမယ်ဆိုတာ)။ ဘုရားစူး မီးရထားလမ်းလို့ မည်ကာမတ္တ (ကစားကွင်းတွေထဲက ကလေးရထားလမ်းသာသာ) ကားရထားသာ သွားနိုင်ပါတယ်..။ အပြည့်အစုံကို ဗွီဒီယို အသံဖိုင်မှာ ဆက်လက်နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
ထိပ်တန်း အတွေးအခေါ်ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဧရာဝတီ မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော် သတင်းကြော်ငြာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးမည်
ရန်ကုန်၊ “လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်”ပြိုင်ပွဲ ဖိတ်ခေါ်သတင်းကြော်ငြာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
““ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်နိုင်အောင် အန်တီကိုယ်တိုင် ဖိတ် ခေါ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အသံနဲ့ရုပ်နဲ့ကို ရိုက်ကူးပြီး သွားပါပြီ””ဟု စီစဉ်သူ ဦးသူရ(ဇာဂနာ)က ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ် ဆောင်မည့်အစီအစဉ်မှာ စက္ကန့်၂၀ကြာအစီအစဉ်ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြိုင်ပွဲကို ဇန်နလ၀ါရီလ၁ရက်မှ၎ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဇာတ်ကားအရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
““လောလောဆယ်တော့ မထုတ်လွှင့်သေးပါဘူး။ ပရိုဂရမ်က သူကိုယ်တိုင် ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပုံစံလေး ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ပွဲစီစဉ်သူတွေအားလုံး ဆုံးဖြတ်ပြီး တော့မှပဲ ဘယ်ကနေလွှင့်မယ်ဆိုတာ အတိအကျပြောနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်ထုတ်လွှင့်မယ့်ကိစ္စကို ကျွန်တော် ပြောနိုင်ပါတယ်”” ဟု ဦးသူရ(ဇာဂနာ)က ပြောသည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲကို ကြာမြင့်ချိန် နှစ်မိနစ်မှမိနစ် ၃၀ကြားရှိသေီာသခကာနညအမေပ င်္ငူာနှင့်ှ့သမအ င်္ငူာ တို့ဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ကြောင်း၊ ဆုများကို အကောင်းဆုံီးသခကာနညအမေပ င်္ငူာ၊ အကောင်းဆုံှး့သမအ င်္ငူာနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင် ရုပ်ရှင်အရေအတွက်အပေါ်မူတည်၍ ဒုတိယနှင့် တတိယဆုများကိုချီးမြှင့်မည့်အပြင် ထပ်မံပြီး ဆုသုံးဆု ချီးမြှင့်ရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်း၊ ပေးအပ်မည့်ဆုမှာ ဆု တံဆိပ်၊ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ဆုငွေများချီးမြှင့်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
“လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်”ပြိုင်ပွဲအတွက် အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်များမှာ ဒါရိုက်တာမောင်သူရ(ဇာဂနာ) နှင့် ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြိုင်ပွဲ ၀င်မည့်ဇာတ်ကားများကို ဒီဇင်ဘာ၂၀ရက် နောက်ဆုံး ထားပြီး ဘားလမ်းရှိ ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းနှင့် အလင်းတန်း ဂျာနယ်တိုက်သို့ ပေးပို့ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာအကြောင်းအရာ များကို လွတ်လပ်စွာဖန်တီးတင်ပြခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂ လိပ်စာတန်းထိုးပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆုရရုပ်ရှင်များကို သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များသို့ ဆက် သွယ်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် ဂျာမနီက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
ဂျာမနီနိုင်ငံက ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝါနာဟိုရာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်း အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အစိုးရ၊ ပါလီမန်၊ အတိုက်အခံပါတီနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့က ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထိုအချက်နှင့် ဆက်စပ်၍ ဘာလင်တွင် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထုဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခွင့် ပြန်လည်ရရှိခြင်းသည် အားရကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းကြောင်း၊ ပါလီမန် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပါတီမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်းသည် ထူးခြား၍ အရေးကြီးသော သတင်းစကားအဖြစ် မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း အဓိကမှာ အစိုးရအနေဖြင့် တရားမျှတ၍ လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးရန်သာလိုကြောင်း၊ အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ဂျာမနီနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးများကို ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေသူများ လွှတ်ပေးသည့် အချက်အပြင် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုဖြစ်စဉ် ပြောင်းလဲမှုများတွင် ပါဝင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် ဤအချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုထားခဲ့ကြောင်း၊ စစ်မှန်သော ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း စသည်ဖြင့် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD သည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ လစ်လပ်နေရာ ၄၈ နေရာအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟု သိရကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းမှုများ
အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်မြှုပ်နှံလိုကြောင်း အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံမှတစ်ဆင့် အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်များမှ ကမ်းလှမ်းထားသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းအပြင် ဂျာမဏီ၊ ဆွီဒင် နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံအပါအ၀င် အီးယူနိုင်ငံအချို့မှလည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ နည်းပညာများ လာရောက်ထောက်ပံ့ခြင်းများ ပြုလုပ်လိုသည်ဟု ပြောကြားထားသည်ဟု လည်းသိရှိရသည်။
"အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံက ကျွန်တော့်ကို ပြောပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရဘက်က တစ်ချို့လူတွေ လာရောက်မြှုပ်နှံချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အမေရိကန်မှ မဟုတ်ပါဘူး ဆွီဒင်၊ နော်ဝေနဲ့ အီးယူနိုင်ငံတွေကလည်း လာရောက်မြှုပ်နှံပြီး နည်းပညာတွေ ထောက်ပံ့လိုတဲ့အကြောင်း အကြောင်းကြားထားပါတယ်"ဟု နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပသည့် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းအပြင် ရန်ကုန်မြို့ကဲ့သို့ အချက်အခြာကျသည့် မြို့များတွင်သာ မဟုတ်ပဲ အခြား မြန်မာနိုင်ငံ၏ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် မြှုပ်နှံမည်ဆိုပါက ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။
အဓိကအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များပြားမှသာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ များပြားလာခြင်းများ ရှိမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
"နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များပြားလာမှ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပါ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ပေါများလာမှာပါ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများမှ လုပ်သားတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဝင်ငွေ တိုးတက်လာ မှာပါ။ အခု မြန်မာက အရှေ့တောင်အာရှမှာ တစ်ရက်ဝင်ငွေ အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံထဲ ပါနေတာလေ။ ဘယ်နိုင်ငံက မဆို သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ညီရင် အားလုံးကို မြှုပ်နှံခွင့်ပြုသွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် မြှုပ်နှံမယ့် အားလုံးကို ခွင့်ပြုပေးသွားမှာပါ။ ဘယ်ကဏ္ဍမဆို မြှုပ်နှံချင်ရင် MIC မှာ လာပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ။ အမြန်ဆုံး ပြန်ချပေးသွားမှာပါ" ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြား ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်းမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၆ ဘီလျံကျော်ရှိပြီး အီးယူနိုင်ငံများ အနေဖြင့် အလုံးအရင်းဖြင့် မြှုပ်နှံမှုမပြုသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဟုသိရသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ကားကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ ပြန်လည်ရောင်းချပေးမည်ဆိုပါက မည်သည့် နိုင်ငံမှ ကားထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကိုမဆို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
အဓိကအားဖြင့် ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံသားများ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းပေါများစေရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်လိုသည့်နိုင်ငံများအနေဖြင့် MIC ဖြင့်လာရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်ညီပါက အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိပါသည်။
"ဘယ်နိုင်ငံကမဆို သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ညီရင် အမြန်ဆုံး ခွင့်ပြုပေးသွားမှာပါ။ MIC နဲ့လည်းလာပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါများအောင်လို့ပါ။ ဒီမှာက အလုပ်အကိုင် မပေါသေးတဲ့အတွက် ၀င်ငွေနည်းတယ်၊ ပြည်ပမှာထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြရတာတို့ ဖြစ်နေတာ။ ဒါကြောင့် Show Room ထက် ကားထုတ်လုပ်မယ်ဆို ပိုပြီးခွင့်ပြုပေးသွားမှာပါ။ Show Room ကနောက်မှသာ တစ်ဖြည်း ဖြည်းခွင့်ပြုမှာ။ Show Room ဆိုရင် လူလေး လေးငါးယောက်ပဲ အလုပ်ရမှာ။ ကားထုတ်လုပ်ရင် လူအများကြီး အလုပ်အကိုင်ရမှာ။ ဒါပေမယ့် ကားထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ကားကုမ္ပဏီရဲ့ Under License နဲ့ထုတ်မယ်။ ပြည်တွင်းမှာပဲ ပြန်ရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီဖို့တော့လိုတယ်။ Proton လည်းပေးမယ်၊ Toyota လည်းပေးမယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေးမယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာမှ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာမယ်၊ အလုပ်အကိုင်တွေ များလာမယ်။ Foreign Investment ၁၀၀% လက်ခံမယ်။ ရှေ့လျှောက် JV, PPP အကုန်လက်ခံပေးသွား မယ်" ဟု မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်း က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
"ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကြားရင် တိုင်ကြားပါ။ ဖြေရှင်းပေးမယ်" ဟု လည်း MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက ထပ်မံ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲရပါကြောင်း
ရန်ကုန်တိုင်းမ် သတင်းဂျာနယ်မှ အကြီးတန်း အယ်ဒီတာ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဇော်ကိုသက်သည် နေပြည်တော်၌ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရပါသဖြင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစု၊ ရန်ကုန် မီဒီယာဂရုပ် နှင့်အတူ Myanmar News Now မှထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲရပါကြောင်း။
Myanmr News Now
ရန်ကုန်မြို့​တွင် ခုံး​ကျော်တံတား​လေး​ခု ​လေး​လအတွင်း​ အပြီး​တည်​ဆောက်မည်
ရန်ကုန်မြို့​ ကမာရွတ်မြို့​နယ်မှာရှိတဲ့​ လှည်း​တန်း​လမ်း​ဆုံ၊​ တာ​မွေက တာ​မွေအဝိုင်း​ထိပ်လမ်း​ဆုံ၊​ ဗဟန်း​မြို့​နယ်ထဲက ​ရွှေဂုံတိုင်လမ်း​ဆုံနဲ့​ အင်း​စိန်မြို့​နယ်က ဘုရင့်​နောင်လမ်း​ဆုံ​တွေမှာ ခုံး​ကျော်တံတား​တွေ တည်ဆောက်သွား​မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကမာရွတ်၊ လှည်းတန်းလမ်းဆုံအနီး ကားများ ပိတ်ဆို့နေပုံ
နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်က ​နေပြည်​တော်မှာလုပ်တဲ့​ ဝန်ကြီး​ဌာနသုံး​ခုနဲ့​ ပြည်တွင်း​မီဒီယာ​တွေ ​တွေ့​ဆုံပွဲမှာ စက်မှုနှစ်ဝန်ကြီး​ ဦး​စိုး​သိန်း​က ​ပြောလိုက်တာလို့​ ​တွေ့​ဆုံပွဲတက်ခဲ့​တဲ့​ သတင်း​ထောက်တဦး​က ​ပြောပါတယ်။
အခုလို ခုံး​ကျော်တံတား​တွေ တည်​ဆောက်ဖို့​လုပ်တာဟာ ရန်ကုန်မြို့​ပြ ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​အတွက် ဖြစ်တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
မြို့​ ပြစီမံကိန်း​ပညာရှင် ​ဒေါက်တာ​ကျော်လတ်က “ဒီကိစ္စက ဘယ်တိုင်း​ပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊​ ဘယ်မြို့​မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်လို့​ ကား​ကများ​ပြီး​လို့​ ကျပ်လာတယ်ဆိုရင် တခါတ​လေကျ​တော့​ ဖြတ်တဲ့​နေရာမှာ ​စောင့်​နေရတာ​တွေ ​ရှောင်ရှား​ဖို့​အတွက် ခုံး​ကျော်တံတား​ ​ဆောက်ကြတာ​ပေါ့​။ ကမာရွတ်၊​ ​ရွှေဂုံတိုင်၊​ တာ​မွေ စသည်ဖြင့်​ သုံး​နေရာ​လောက်က​တော့​ တကယ်ကို အ​ရေး​တကြီး​ လို​နေပါတယ်။ အထူး​သဖြင့်​က​တော့​ ရန်ကုန် ​မြောက်ဘက်နဲ့​ ​တောင်ဘက် ဆက်တဲ့​ပြည်လမ်း​ပေါ့​။ ပြည်လမ်း​က ကမာရွတ်​နေရာ တည့်​တည့်​မှာ အဲဒီနား​မှာက လမ်း​ငါး​ခု ဆုံ​နေတာပါ။ အဲ​တော့​ ခုံး​ကျော်တံတား​ရှိတယ်ဆိုရင် ​မြောက်ဘက် ​တောင်ဘက်ကို သွား​နေတဲ့​ ယာဉ်​တွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ​ရောက်သွား​မှာ​ပေါ့​။ အခု​နေ အဲဒီလမ်း​ကို သွား​ရတာက ​တော်​တော်ကြာတယ်။ မင်္ဂလာဒုံ ​လေဆိပ်က​နေပြီး​တော့​ မြို့​ထဲကို​ရောက်ဖို့​ တနာရီ​လောက် ​မောင်း​ရတယ်။ ခုံး​ကျော်တံတား​ ရှိရင်​တော့​ မြန်လာမှာ​ပေါ့” လို့ ​ပြောပါတယ်။
လော​လောဆယ် အခုနှစ် မိုး​ရွာသွန်း​မှု အဆက်မပြတ်ခဲ့​တာ​ကြောင့်​ ရန်ကုန်မြို့​တွင်း​လမ်း​တွေ ဆိုး​ဆိုး​ဝါး​ဝါး​ပျက်စီး​နေတာ ဦး​စား​ပေး​ပြင်ဆင်သင့်​တယ်လို့​ မြို့​ခံတဦး​က ​ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့​ မှာ ​နေထိုင်သူလူဦး​ရေ​ပေါင်း​ ငါး​သန်း​လောက်ရှိမယ်လို့​ ခန့်​မှန်း​ပြောဆို​နေကြပြီး​ ​နေ့​စဉ်သိန်း​နဲ့​ချီတဲ့​ မြို့​ခံ​တွေ မြို့​ထဲနဲ့​ မြို့​လယ်ကို ခရီး​သည်တင် ဘတ်စ်စကား​တွေ စီး​နင်း​သွား​လာ​နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလင်တန်ရဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ် သတင်းယူခွင့် ဦးရေ ကန့်သတ်
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတွင်း သတင်းယူမယ့် သတင်းထောက် အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သည့် အမေရိကန်- အာစီယံ ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်ကို တွေ့ရစဉ်။ (State Dept Image)
ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်မှာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်ဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနေ့ တွေ့ဆုံအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဟီလာရီ ကလင်တန်တို့ ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ် ခြံဝင်း အတွင်းမှာ ကျင်းပဖို့ ရှိပြီး နေရာ ထိုင်ခင်း အခြေအနေ အရ သတင်းထောက် အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားတယ်လို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ် ခြံဝင်း အတွင်း အပြင် လုံခြုံရေး အတွက် အမေရိကန် သံရုံးကလည်း ပူးတွဲ တာဝန်ယူထားမှာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ အသင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတွင်း သတင်းယူနိုင်ဖို့ အစိုးရ အသိအမှတ် ပြုထားတဲ့ ပြည်တွင်း သတင်း မီဒီယာတွေ ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံ ၄ ပုံ အပါအ၀င် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေနဲ့ တကွ လျှောက်ထားကြရကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပ သတင်း မီဒီယာတွေနဲ့ အလွတ် သတင်းထောက်တွေ အခုအချိန်ထိ ခွင့်ပြုချက် မရသေးဘူးလို့ အလွတ် သတင်းထောက် တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်​နေ့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်ရုံး​များ​တွင် ကျင်း​
ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်​နေ့​အထိမ်း​အမှတ်ပွဲ​တွေကို ရန်ကုန်မြို့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် ဗဟိုဌာနချုပ်အပြင် ပြည်နယ်နဲ့​တိုင်း​အသီး​သီး​က ရုံး​တွေမှာပါ တချိန်တည်း​တပြိုင်တည်း​ ကျင်း​ပဖို့​စီစဉ်​နေပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာ ထူး​ထူး​ခြား​ခြား​ ​အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ ​တေး​သီချင်း​ခွေ တ​ခွေပါ ဖြန့်​ချိမယ်လို့​ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး​ ကူး​စက်ခံ​နေရသူ​တွေကို အကူအညီ​ပေး​နေတဲ့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်ဝင် မဖြူဖြူသင်း​က ​ပြောပါတယ်။
“ဒီနှစ်ထူး​ ခြား​တာ​တော့​ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ သီချင်း​ခွေ​လေး​ တ​ခွေကို ပြည်တွင်း​မှာ ရှိ​နေတဲ့​ အဆို​တော်​တွေက​နေ ​မေတ္တာလက်​ဆောင်နဲ့​ သီဆို​ပေး​ထား​တဲ့​ အ​ခွေ​လေး​တစ်​ခွေ ထွက်မယ်။ သီချင်း​ခွေက​တော့​ နာမည်မ​ပေး​ထား​ဘူး​။ ကမ္ဘာ့​အေအိုင်ဒီအက်စ်​နေ့​ အခမ်း​အနား​ သီချင်း​ခွေလို့​ပဲ ​ပေး​ထား​တယ်။ အထိမ်း​အမှတ်အ​နေနဲ့​ သီချင်း​ခွေထုတ်သလို ပြက္ခဒိန်တခုလည်း​ ထုတ်ဖြစ်တယ်။ အန်တီ့​ပုံနဲ့​ပဲ​ပေါ့​။”
ဒီအ​ခွေမှာ ​တေး​ရေး​ ကိုရဲလွင်၊​ ​တေး​သံရှင် ရင်ဂို၊​ ​ဆောင်း​ဦး​လှိုင်၊​ သား​ထွေး​၊​ ​ဇေယျာ​သော်တို့​ ​ရေး​သား​သီဆိုထား​တဲ့​ ​တေး​သီချင်း​ပေါင်း​ ၁၇ ပုဒ် ပါဝင်မယ်လို့​သိရပါတယ်။
အခမ်အနား​မှာ ​အေအိုင်ဒီအက်စ် ​ဝေဒနာရှင်​တွေကို ​ဆေး​ဝါး​နဲ့​ အာဟာရအကူအညီ ​ပေး​အပ်မယ့်​အပြင် ဂီတ​ဖျော်​ဖြေပွဲ​တွေ လုပ်မယ့်​အစီအစဉ် ရှိတယ်လို့​လည်း​ သိရပါတယ်။
အဖွဲ့​ ချုပ်မှာကျင်း​ပမယ့်​ ကမ္ဘာ့​အေအိုင်ဒီအက်စ်​နေ့​ အခမ်း​အနား​ကို အ​မေရိကန်နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ ဟီလာရီကလင်တန် တက်​ရောက်ပြီး​ ရန်ကုန်မြို့​ ဒဂုံ​တောင်မှာ ဖွင့်​လှစ်ထား​တဲ့​ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူညီ​စောင့်​ရှောက်​ရေး​ ​ဂေဟာကို သွား​မယ်လို့​သတင်း​တွေထွက်​နေ​ပေမယ့်​ မ​သေချာ​သေး​ဘူး​လို့​မဖြူဖြူသင်း​က ​ပြောပါတယ်။
အလား​တူ ​နေပြည်​တော်မှာလည်း​ အစိုး​ရက ကမ္ဘာ့​အေအိုင်ဒီအက်စ်​နေ့​ အခမ်း​အနား​ကို ကျင်း​ပဖို့​ရှိ​နေပြီး​ ရန်ကုန်မြို့​ ယုဒသန်ရိပ်သာမှာ​တော့​ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်​နေ့​မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး​ကူး​စက်ခံ​နေရသူ​တွေနဲ့​ဖွဲ့​ထား​တဲ့​ မြန်မာ​ပေါ့​စတစ် အုပ်စုအပါအဝင် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အ​ရေး​ဆောင်ရွက်​နေတဲ့​အဖွဲ့​ ၇ ဖွဲ့​ပေါင်း​ပြီး​ ရန်ပုံ​ငွေ​ဈေး​ရောင်း​ပွဲနဲ့​ ​ဖျော်​ဖြေပွဲ​တွေ ကျင်း​ပဖို့​ ရှိတယ်လို့​ သိရပါတယ်။
မြန်မာပြည်အ​ခြေအ​နေမှန် မစ္စကလင်တန်ကို တိုင်း​ရင်း​သား​များ​အသိ​ပေး​မည်
မြန်မာပြည်တွင်း ​ ဖြစ်​ပေါ်​ပြောင်း​လဲမှု ပကတိအ​ခြေအ​နေ​တွေကို သိရှိနိုင်​စေဖို့​အတွက် အ​မေရိကန်နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ မစ္စ ဟီလာရီကလင်တန် မြန် မာနိုင်ငံကို ​ရောက်ရင် အိတ်ဖွင့်​ပေး​စာတ​စောင် ​ပေး​ပို့​ပြီး​ တင်ပြဖို့​ ယူအန်​အေ (ညီညွတ်​သောတိုင်း​ရင်း​သား​မဟာမိတ်များ​အဖွဲ့​) က စီစဉ်​နေပါတယ်။
မစ္စကလင်တန်ဟာ နိုဝင်ဘာလကုန်က​နေ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်​နေ့​အထိ မြန်မာ နိုင်ငံကို ​ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။
ဟီလာရီ ကလင်တန် (ဓာတ်ပုံ - ရိုက်တာ)
ခရီး​စဉ်မှာ မစ္စကလင်တန်ဟာ အစိုး​ရတာဝန်ရှိသူ​တွေနဲ့​ရော အတိုက်အခံ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်က တာဝန်ရှိသူ​တွေနဲ့​ပါ ​တွေ့​ဖို့​ရှိ​နေပြီး​ တိုင်း​ရင်း​သား​ အဖွဲ့​တွေနဲ့​တော့​ ​တွေ့၊​ မ​တွေ့​ မသိရ​သေး​ပါဘူး​။
တိုင်း​ရင်း​ သား​ ၇ ပါတီက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့​ ဖြစ်​ပေါ်​ပြောင်း​လဲမှု​တွေဟာ ထင်သာမြင်သာ မရှိ​သေး​ဘူး​ဆိုတာကို သတိထား​မိ​စေဖို့​ ရည်ရွယ်ပြီး​ ပူး​ပေါင်း​ စာ​ရေး​သား​ဖို့​ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း​မှု​တွေ ပြုလုပ်ခဲ့​ပြီး​ပြီလို့​ ရှမ်း​တိုင်း​ရင်း​သား​များ​ ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် ဦး​စိုင်း​လိတ်က ​ပြောပါတယ်။
“အဓိက​တော့​ မြန်မာပြည်ရဲ့​ ဖြစ်​ပေါ်တိုး​တက်မှု အ​ခြေအ​နေဟာ အား​လုံး​က ​ပြော​နေသလို ထင်သာမြင်သာ ရှိ​သေး​တာ မဟုတ်ဘူး​။ အပြည့်​အဝ ပြုပြင်​ပြောင်း​လဲ မှု​တွေ ရှိ​သေး​တာမဟုတ်ဘူး​ဆိုတာကို မစ္စကလင်တန်အ​နေနဲ့​ သူ့​အဖွဲ့​သား​တွေ အကုန်လုံး​ သတိထား​ပြီး​တော့​မှ သတိရှိရှိနဲ့​ သိသွား​စေချင်လို့​ပါ။”
ဒီစာကို ပူး​ပေါင်း​ရေး​သား​မယ့်​ မဟာမိတ်အဖွဲ့​ထဲမှာ ပြည်​ထောင်စုတိုင်း​ရင်း​ သား​လူမျိုး​များ​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်နဲ့​အတူ ရှမ်း​တိုင်း​ရင်း​သား​ များ​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်၊​ ရခိုင်ဒီမိုက ​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်၊​ မွန်အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီ အဖွဲ့​ချုပ်၊​ ဇိုမီး​အမျိုး​သား​ကွန်ကရက် စတဲ့​ ညီညွတ်​သောတိုင်း​ရင်း​သား​များ​ မဟာမိတ်အဖွဲ့​ဝင် ၇ ဖွဲ့​တို့​ပါဝင်ပြီး​ မ​နေ့​က ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြတာပါ။
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ ဆင်ဖြူတော် ဆုတောင်း